ရရှိနိုင်သည့် SliTaz 4.0: PC များအတွက် 128Mb RAM: D | Linux မှ
ရရှိနိုင်သည့် SliTaz 4.0: PC များအတွက် 128Mb RAM: D
ဒီနေ့ SliTaz ဗားရှင်း ၄.၀ (အလေးချိန် ၄၀mb အောက်သာရှိသည်။ ) ၂ နှစ်ကြာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပြီး ပြုပြင်မှုများနှင့်တိုးတက်မှုများ.
SliTaz GNU / Linux ၎င်းသည် CD-ROM သို့မဟုတ် memory ကဲ့သို့ဖြုတ်တပ်နိုင်သောထုတ်ကုန်များကို အသုံးပြု၍ ကွန်ပျူတာ၏မှတ်ဉာဏ်တွင်တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်သောအခမဲ့လည်ပတ်မှုစနစ်ဖြစ်သည် ယူအက်​​စ်ဘီ။ ၎င်းသည် hard disk ပေါ်တွင်အလင်း၊ မြန်။ တပ်ဆင်နိုင်သည်။ SliTaz ၎င်းကိုပုံရိပ်ပုံစံဖြင့်ဖြန့်ဝေသည် LiveCD၎င်းသည်နောက်ပိုင်းတွင် system ကို boot လုပ်နိုင်ရန်အတွက် cdrom သို့အလွယ်တကူမီးရှို့နိုင်သည်။ system အလုပ်လုပ်နေလျှင်သင်ယခုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည် LiveCD နှင့်အခြားအရာများအတွက်စာဖတ်ခြင်းယူနစ်ကိုအသုံးပြုပါ။ The LiveCD အပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားသောဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ဂရပ်ဖစ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်သင့်အချက်အလက်များကိုမှတ်ဉာဏ်တွင်သိမ်းဆည်းခြင်းတို့ကိုထောက်ပံ့သည် ယူအက်​​စ်ဘီ။ အထုပ်မန်နေဂျာနှင့်အတူစနစ်တိုးချဲ့နိုင်ပါတယ် Tazpkgနှင့်ဗားရှင်းများအတွက်လုံခြုံရေးမွမ်းမံမှုများကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားပါသည် ချက်ပြုတ် y တည်ငြိမ်သော.
စီမံကိန်း SliTaz ထို့အပြင်အသုံးပြုသူများအတွက်အခမဲ့နည်းပညာပံ့ပိုးမှုပေးသည် စာပို့စာရင်း (စာရင်း i18n) နှင့် အင်္ဂလိပ်လိုဖိုရမ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ အကြံပြုချက်များသို့မဟုတ်မှတ်ချက်များအတွက်စာပို့စာများမှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေ၊ စာတိုက်မှဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်သည် ။
ဖိုင်စနစ်အမြစ်သည် ၁၀၀ MB ခန့်ရှိပြီး ISO ပုံသဏ္100ာန်သည် ၃၀ မပြည့်သည်။
Lighttpd ဝဘ်ဆာဗာ, CGI နှင့် PHP ကိုထောက်ပံ့မှုနှင့်အတူ box ကိုထဲက။
စာသားပုံစံဖြင့် Midori သို့မဟုတ် Retawq ဖြင့်အင်တာနက်ကိုရှာဖွေပါ။
Alsa ၏အသံဖွင့်စက်နှင့်ရောနှောစက်များ၊ CD ripper နှင့် encoder များမှတစ်ဆင့်အသံပံ့ပိုးမှု။
စာပို့ခြင်း၊ စကားပြောခြင်းနှင့် FTP ဖောက်သည်များ
Dropbear SSH သုံးစွဲသူနှင့်ဆာဗာ။
Xorg / Xvesa (X ဆာဗာ) တွင် Openbox ဖြင့်အလုပ်လုပ်သော Elegant desktop ။
command line အသုံးအဆောင်များအတွက်အိမ်လုပ် dialog box များ။
မဆိုမှန်ကနေ installable 2300 packages များ။
SliTaz GNU / Linux 4.0 ၎င်းသည် i486 သို့မဟုတ် x86 ပရိုဆက်ဆာများရှိစက်အများစုနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ LiveCD ကိုအသုံးပြုရန်ဤဗားရှင်းတွင် 192MB Memory အနည်းဆုံးအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။ အကယ်၍ လိုအပ်လျှင်လိုအပ်လျှင် Memory Resource အနည်းငယ်သာ Boot လုပ်ရန် System အသစ်တစ်ခုသည်သင်၏ Memory ကိုအလိုအလျောက် detect လုပ်လိမ့်မည်။ SliTaz တွင်သိုလှောင်မှုပမာဏ ၃၃၅၀ ပါရှိသည်။ သင်၏စက်ကိုဂရပ်ဖစ် desktop (E3350) အဖြစ်ပုံတူစတူဒီယိုအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်သင်လိုအပ်သည်။ GIMP o Inkscape, ဒါမှမဟုတ် Kino နှင့်အတူဗီဒီယိုအယ်ဒီတာ။ WWW ကိုလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ခြင်း၊ VoIP၊ အီးမေးလ်နှင့် web browser မှတဆင့်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည်။ Package များကိုရှာဖွေရေး function မှတစ်ဆင့်တွေ့နိုင်သည် Tazpkg, ။ သို့မဟုတ်ဝဘ်ဆိုက်မှတဆင့်: http://pkgs.slitaz.org/~~V
ပုံမှန်အားဖြင့်, ၏ LiveCD SliTaz window manager ကိုသုံးပါ Openbox အလွန်အလင်းနှင့်တည်ငြိမ်ဖြစ်ခြင်းသည်။ "lxpanel" taskbar ကိုပေါင်းစပ်ခြင်းက၏စံနှုန်းများအပေါ် အခြေခံ၍ မီနူးတစ်ခုကိုတက်ကြွစွာပံ့ပိုးပေးသည် Freedes Desktop။ Desktop နှင့် Icon များကိုစီမံခြင်းသည်အလုပ်ဖြစ်သည် PCManFM.
ဒေတာဘေ့စ်ထဲသို့ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ထည့်သွင်းထားသည်။
ခေတ်မီစက်ပေါ်တွင် ၁၀ စက္ကန့် (သို့) ဒီထက်နည်းစတင်ပါ။
အသစ်သော control panel ကိုနှင့်အတူဗဟိုဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ။
SliTaz package များကိုတစ်မိနစ်အတွင်းဖန်တီးရန်တည်ဆောက်နိုင်သော tool အသစ်။
LiveCD တွင်တစ်ခုပါ ၀ င်သော4distros ။
နယူးဂရပ်ဖစ် installer ကိုနှင့် update ကို။
လူနေမှုစနစ်များအတွက်အသစ် GUI သေတ္တာများနှင့်ကိရိယာများ။
တိုးတက်လာသော web boot: boot.slitaz.org
၄.၀ ၏အမှားအယွင်းများ ဝီကီပေါ်မှာ
သင် .iso ကို download လုပ်ယူနိုင်သည် တည်ငြိမ် y ဘာသာပြန်အတွက် စမ်းသပ်ခြင်း (ချက်ပြုတ်နေသည်) အောက်ပါ link များမှ:
SliTaz 4.0 ကို download လုပ်ပါ | SliTaz Cooking 4.0 ကို download လုပ်ပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » ရရှိနိုင်သည့် SliTaz 4.0: PC များအတွက် 128Mb RAM: D
Juan Pablo ဟုသူကပြောသည်
လက်တော့ပ် ၂ ခုကိုစမ်းသပ်ပြီးနှစ်ခုစလုံးမှာမစမ်းသပ်ခဲ့ပါဘူး
Laptop1- Corei5 4RAM
Laptop2- DualCore 3RAM
Juan Pablo အားပြန်ပြောပါ
ဒီလက်တော့ပ်တွေနဲ့ပေါ့။ ဒါဆိုသင်အလင်းဖြာတာကိုလိုချင်သလား။ သင်လိုချင်တာကိုသင်ထည့်နိုင်တယ်
Hahaha, သိပ်သိချင်စိတ် xD
jwm သို့မဟုတ် archbang မပါသောခွေးတစ်ကောင်
ကောင်းပါပြီ။ kernel က loading လုပ်နေစဉ်မှာ "stuck" ရှိနေပြီးဆက်လက်မလုပ်ပါ။ ဗားရှင်းနှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်တယ်၊ ငါကသင်အကြံပြုသောအခြားပေါ့ပါးသောဖြန့်ချိမှုကိုကြိုးစားသွားမည်။
Puppy Linux၊ Slitaz၊ Dawn Small Linux 🙂
ဒါကိုကူးယူပြီးပြီ။ Slitaz သည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံး distros များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ )
ငါဗားရှင်း 3.0 တွင်စမ်းသပ်ပြီးပါပြီ၊ အထူးသဖြင့် ^^ PCs ဟောင်းကိုကယ်တင်ရန်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်ကြီးစွာသော distro တစ်ခုဟုထင်ရသည်
စောင့်ဆိုင်းနေပြီးနောက် xvesa မူကွဲကိုဖယ်ထုတ်လိုက်သည်
အလွန်ကြီးစွာသောအလင်း distro ။ မှတ်ဥာဏ်နည်းသောစက်များအတွက်အထူးသင့်တော်သည်။ virtualbox ထဲကိုထည့်လိုက်တာနဲ့သူက startup မှာ 30mb ram ကိုသုံးတယ်ဆိုတာမယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။
ပြီးတော့အရာအားလုံးကို RAM ထဲကိုတိုက်ရိုက် ၀ င်ပါတယ်။ ဒါကအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် Corei7 HAHA ရှိအခြား distro တစ်ခုထက်ပိုမြန်သည်။
ငါကြိုးစားကြည့်ဖို့လိုတယ်၊ ငါတော့မထင်ဘူး : OR
ကျွန်တော့်ကို 40 mb နှုန်းနဲ့ boot လုပ်တဲ့ pentium III မှာ archlinux + openbox ရှိတယ်။ ထိုအခါ lxde နှင့်အတူ debian 70mb မှာစတင်ခဲ့သည်။ နည်းနည်းစားသောရှားပါးသော distros များကိုရှာဖွေရန်မလိုအပ်ပါ။
ခြားနားချက်တစ်ခုရှိပါသည်။ ဤ "ရှားပါးသော distros" တွင် hardware နှင့် binaries နှစ်ခုစလုံးသည်အဟောင်းကို hardware ပေါ်တွင်အသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Slitaz ကို i486 အတွက်ပြုစုသည်။ Arch ကို i686 အတွက်ပြုစုသည်။
Arch ကို Pentium I 133mhz ထဲကိုထည့်ချင်တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းဘယ်မှာငါဖတ်ခဲ့သလဲဆိုတာမမှတ်မိတော့ဘူး။ အဲ့ဒီ processor ရဲ့ဗိသုကာ i586 ကြောင့်။
ConnochaetOS သည်၎င်းဗိသုကာအတွက်ပြုစုပြီးကတည်းကအလုပ်လုပ်နိုင်သည့် distro တစ်ခုဖြစ်သည်။
I386 binaries သည် i586 သို့မဟုတ် i686 ကဲ့သို့သောဗိသုကာပညာအပေါ်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သော်လည်းအခြားတစ်ဖက်တွင်မူမဟုတ်ပါ။
အနည်းဆုံးဒါကငါနားလည်တဲ့ P = P
ဒါပေမယ့် Debian က i386 အတွက်ပါ။ Arch သည်အလွန်ဟောင်းနွမ်းသောစက်များအတွက်မမှန်ပါ။
ကျွန်ုပ်၏ Intel Pentium Dual Core E2140 နှင့် 1GB of Ram တို့ဖြင့်၎င်းသည် TT ကိုမစတင်ပါ။
၎င်းသည်ကောင်းသော distro ပုံရသည်။ သို့သော်အမှန်စင်စစ် Ridri သည် Debian နှင့်မှန်ကန်သည်။ သင့်တွင်အလွန်အလင်းစနစ်ရှိပါက၎င်းကိုသင်ပိုမိုလေးသောပရိုဂရမ်များကိုတင်သောအခါ၎င်းသည်ပေါ့ပါးမှုမရှိတော့သောကြောင့်သင်အမြဲတမ်းလိုအပ်သည်။ သင်ပြောသကဲ့သို့ရှားပါး distros များ။
Debian နှင့် arch repositories များတွင်ပေါ့ပါးသော application အမျိုးမျိုးဖြစ်သော midori, abiword, qmmp, pcmanfm, xfburn ... နှင့် Con Kolivas ကဲ့သို့ပေါ့ပါးသော kernels များရှိသည်။
ပေါ့ပါးသော distros များသည်သင်ရှာဖွေစရာမလိုသောကြောင့်လွယ်ကူစေသည်။ သို့သော်သင်သည် debian သို့မဟုတ် arch ကိုနှစ်သက်သည်ဆိုလျှင်၎င်းတို့ကိုအမြင့်ဆုံးအထိအလင်းရောင်ပေးရန်အမြဲတမ်းရွေးချယ်စရာရှိသည်။ Debian ၏ကြီးမားသောအားသာချက်မှာလတ်တလောဗားရှင်းမဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ Linux linux package များကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည်။
တစ်ခါတလေဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်သုံးခဲ့ရတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ m board အသစ်ဟာမီးလောင်သွားလို့ပါ။ သိုလှောင်ရာကနေ "အဟောင်း" ကိုသာကယ်တင်ရတယ်၊ အဲဒီမှာ 222MB (မြင်နိုင်) RAM နဲ့ AMD Semprom သာရှိတယ်။ ငါ conky ကို configure လုပ်ပြီး emesene ကိုလည်း install လုပ်နိုင်တယ်။ အဲဒါကပုံမှန်အားဖြင့် midori နဲ့ရောက်လာတယ်။ ဒါကငါ့အတွက်လုံလောက်တယ်။ ငါဒီ distro ကိုအသုံးပြုသူအနေနဲ့အနည်းဆုံး ၁ လနေပြီးငါအဲ့ဒီ installer အကြောင်းကိုလေ့လာခဲ့တယ်။ တောင်ကြီးမြို့ အရာက algorithm တွင်၎င်း၏ packets များကိုချုံ့သကဲ့သို့အလွန်မြန်သည် ဇော် ဒေါင်းလုပ် / တပ်ဆင်သည့်အချိန်တွင်အမြန်ဆုံး that ဖြစ်သည်
ငါဒီ Distro0o0o0o0 love ကိုနှစ်သက်တယ်
ငါက Fixed စမ်းသပ်လျှင်ဤသည်ကဘာကစွမ်းဆောင်ရည်ကတိပေး; ပျံသန်းဖို့လိုတယ် နီးပါး Tiny Core နဲ့တူ။
ဒီ distro ကကောင်းတယ်၊ ငါမသုံးတဲ့စက်ကသတင်းအချက်အလက်တွေကိုတစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးသုံးခဲ့ဖူးတယ်။ ဒီကနေ့ငါ Virtualbox မှာစမ်းသပ်နေတယ်၊
Arch Linux တွင်စာလုံးများ၏ display ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပါ
Ubuntu တွင် Ruby ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။